तेक्वान्दो गुरुको फुटबल क्रान्ति - खेल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
यज्ञराज जोशी पुस १६
सुदूरपश्चिम–११ का अध्यक्ष सुरेश हमाल
दुईवर्ष अघि सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको पहिलो संस्करणको घोषणा गर्दा पुरस्कार राशि पनि सामान्य थियो। देशका अन्य क्षेत्रमा हुने गोल्डकप झै आयोजक सुदूरपश्चिम–११ क्लबले पनि विजेता मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबलाई ५ लाख र उपविजेता संकटा क्लबलाई २ लाख पचास हजार दिएको थियो।
गतवर्ष सम्पन्न दोस्रो संस्करणबाट भने खप्तड गोल्डकपले मोफसलका गोल्डकपमा सर्वाधिक धनराशिको पहिचान बनायो। ए डिभिजनका क्लबहरुको प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगिताको विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लबले ११ लाख तथा उपविजेता एपीएफले भने ५ लाख प्राप्त गरे।
दोस्रो संस्करणको समापन समारोहमा आयोजक सुदूरपश्चिम–११ का अध्यक्ष सुरेश हमालले तेस्रो संस्करणको विजेताले दोब्बर अर्थात २१ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने घोषणा गरे। उपविजेताले पनि दोब्बर अर्थात १० लाख पुरस्कार पाउँदैछन्। जुन मोफसलको फुटबलमा एक क्रान्ति नै हो। प्रतियोगिताको बजेट नै १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यही पुस २३ बाट सुरु हुने तेस्रो संस्करणमा रुस्लान थ्री स्टार क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, सिएमजी क्लब संकटा, काँकाडभित्ता ट्रेनिङ सेन्टर झापा, नेपाल एपिएफ क्लब, च्यासल युथ क्लब र आयोजक सुदूरपश्चिम ११ स्पोर्टस् क्लबसँगै भारतको दिल्ली युनाइटेड लगायतका टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्देछन्।
२०६८ सालमा सुदूरपश्चिममा भएको छैठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पुरुष फुटबलको उपाधि घरेलु टोली सुदूरपश्चिमले जितेको थियो। सुदूरपश्चिमले देशकै पाँच विकास क्षेत्र र विभागीय टोलीलाई पछि पार्दै त्यसै उपाधि जितेको थिएन्। प्रतिभावान खेलाडीहरुको मेहनतको प्रतिफल स्वरुप उसले उपाधि घरैमा राख्न सफल भएको हो।
तर विडम्बना सुदूरपश्चिमलाई स्वर्ण पदक दिलाउने ती खेलाडीहरुको प्रतिभा पोख्ने ठाउँ भने कहीँ थिएन्। न सुदूरपश्चिममा कुनै गोल्डकप हुन्थ्यो, न सुदूरपश्चिमको कुनै क्लब थियो, जसबाट उनीहरु बाहिर हुने गोल्डकपमा सहभागी हुन सकून्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)ले वर्षमा आयोजना गर्ने एक, दुईवटा फुटबल कार्यक्रममा उनीहरु सीमित थिए। बाँकी समयमा स्थानीय स्तरमा हुने बोका कप, दशैँ कप खेल्दा उनीहरुको प्रतिभाप्रति न्याय भइरहेको थिएन्।
त्यो कुरा फुटबलप्रति सानैदेखि रुची भएका सुरेश हमाललाई बिझ्यो र उनले धारणा बनाए, सुदूरपश्चिमको एउटा क्लब र गोल्डकपको।
‘देशका चार विकास क्षेत्रमा गोल्डकपको आयोजना हुन्थ्यो,’ उनले सुदूरपश्चिम–११ क्लबको स्थापनाको उद्देश्य प्रष्टाए, ‘त्यहाँका खेलाडीले एक्स्पोजर पाइरहेका थिए। गोल्डकपहरु खेलिरहेका थिए। तर, राष्ट्रिय च्याम्पियन सुदूरपश्चिमका प्रतिभावान खेलाडीहरुले भने न कुनै गोल्डकप खेल्न पाएका थिए न कुनै एक्स्पोजर नै। त्यसकारण हामीले सुरुमा सुदूरपश्चिममा आफैं गोल्डकप सञ्चालन गर्ने र अरुलाई बोलाउँने तथा पछि अरुले बोलाउँदा खेल्न जाने योजना बनायौं।’
सुरेश सानो उमेरदेखि नै फुटबलका पारखी थिए। तर, परिवारको सल्लाहमा उनी मार्सल आर्टस्को प्रशिक्षण लिन पुगे। तेक्वान्दोका उनी सेकेन्ड डान हुन्। उनले थुप्रै राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा पनि आफ्नो कौशल देखाइसकेका छन्।
सोहीक्रममा उनले राखेपबाट २०५३ सालमा तेक्वान्दो प्रशिक्षकका स्थायी नियुक्ति पाए। दुईवर्ष लगातार तेक्वान्दो प्रशिक्षण गराएपछि उनको सरुवा घरबाट टाढा हुने भो। तर, उनलाई घर छाड्ने मन लागेन् र कराँतेको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिँदै सानैदेखि मनपर्ने खेल फुटबलमा फर्कने निर्णय लिए।
तेक्वान्दो प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएपछि उनले आफ्नो गाउँ भजनी (कैलालीको दक्षिण पुर्वी क्षेत्र)मा हिमालय फुटबल क्लबको स्थापना गरे। कैलालीका गाउँबाट गाउँबाट खेलाडी जुटाएर उनले हिमालयको टिम पनि बनाए भने प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजना गरे।
गतवर्ष मात्रै क्लबले १९ औं संस्करणको ‘लालबोझी कप’ प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। जसमा सहभागिता जनाउन देशका विभिन्न स्थानका साथै भारतको उत्तर प्रदेशका टोलीहरु पनि आउँने गर्छन्। हमालकै सक्रियतामा क्लबले आफ्नै कार्यालय पनि स्थापना गरेको छ। र, आगामी समयमा पनि हिमालय उत्तिकै सक्रिय भएर फुटबल विकासमा लाग्ने हमाल बताउँछन्।
२०५९–६० सालमा गाउँमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। कहाँ कसलाई के हुने हो? गाउँमा त्रासको वातावरण थियो। अर्कातिर छोराछोरी पनि ठूला हुन थालेपछि उनीहरुको पढाईका लागि सुरेश परिवारसहित धनगढी झर्यो।
छैठौंको उपाधि जिताउँदाका मेरुदण्ड
धनगढी झरेपनि सुरेशको फुटबलप्रतिको मोह घटेन्। उनले कैलालीका विभिन्न क्षेत्रका खेलाडीलाई समेट्दै विजय स्पोर्टस क्लब गठन गरे र नियमित प्रशिक्षण सुरुवात गराए।
सुरेशले विजय क्लबको प्रशिक्षकको जिम्मा दीपेश योन्जन लामालाई दिएका थिए। त्यतिबेला खेलाडीलाई पैसा दिन सक्ने अवस्था थिएन् तर सुरेशले प्रशिक्षकलाई भने खाजा खर्च वापत मासिक १५ हजार दिन्थे। त्यो रकम कहीँबाट आउँदैन् थ्यो, उनले आफै खल्तीबाट दिनुपथ्र्यो।
विजय स्पोर्टसले सुदूरपश्चिममा हुने विभिन्न प्रतियोगितासहित भारतको उत्तर प्रदेशमा हुने प्रतियोगिता खेल्थ्यो। ‘हामी लखनउ, दिल्ली, नैनीताल लगायतका क्षेत्रमा वर्षका आठ दश वटा प्रतियोगिता खेल्थ्यौ,’ सुरेशले सम्झिए, ‘तिनै खारिएका खेलाडीहरुले छैठौँमा सुदूरपश्चिमलाई स्वर्ण पदक दिलाएका थिए।’
विजय स्पोर्टसका अधिकांश खेलाडीहरु नै छैठौं खेलेको टिममा थिए। तीनै खेलाडीहरुले नै घरेलु दर्शक सामू सुदूरपश्चिमका लागि गर्विलो स्वर्ण पदक जितेका थिए।
छैठौंपछि स्वर्णपदक जितेका खेलाडी तथा सुदूरपश्चिमको फुटबल विकासका राज्यका निकायले केही गर्ला कि भन्ने सुरेशलाई आशा थियो तर एक दुई वर्षसम्म पनि कसैले केही पहल नगरेपछि सुरेश आफैले सुदूरपश्चिम–११ टोलीको निर्माण सुरु गरे।
प्रायोजक बिनै गोल्डकप
‘सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरु राम्रो नभएको भए च्याम्पियन हुन्थेनन् तर, ती राम्रा खेलाडीहरुले प्रतियोगिता नै खेल्न पाएका थिएनन्,’ सुरेशले भने, ‘राखेपले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताबाहेक अन्य कुनै प्रतियोगिता ती खेलाडीहरुले खेल्न पाइरहेका थिएनन्। सुदूरपश्चिमको क्लब नभएको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा हुने गोल्डकपमा पनि कसले बोलाउँने? त्यही भएर हामीले क्लब स्थापनासँगै गोल्डकप घोषणा गरेका हौं।’
सुरेशको सक्रियतामा २०७३ मा फुटबललाई मायाँ गर्नेहरुको समूह मिलेर सुदूरपश्चिम–११ नामक क्लब गठन गरे। सोही क्लबले उदेश्य अनुरुप तीन महिनामै खप्तड गोल्डकपको पहिलो पहिलो संस्करण घोषणा गर्यो।
तर, जति प्रयास गरेपनि पहिलो संस्करणमा उनीहरुले प्रायोजक पाउन सकेनन्। तर, क्लबका सदस्यहरुले हिम्मत हारेनन्। मुख्य प्रायोजक बिना नै प्रतियोगिता सञ्चालन गरे।
‘पहिलो संस्करणको पुरस्कार राशि जम्मा पाँच लाख थियो, तर मुख्यप्रायोजक नै नपाएपछि प्रतियोगिता मुख्य प्रायोजना बिना नै सञ्चालन गर्नुपर्यो,’ सुरेशले पहिलो संस्करणको सम्झना गरे, ‘यसमा ४६ लाख खर्च भएको थियो। त्यसको आधा बढी रकम क्लबका सदस्यहरुले खल्तीबाट हालेका थिए।’
दोस्रो संस्करणमा भने कांग्रेस नेतृ आर्जु राणा देउवाले प्रायोजक जुटाउनमा ठूलो सहयोग पुर्याइन्। तत्कालिन चुनावी अवस्थामा आर्जु सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उठेकी थिइन्। पराजित भएपनि उनले त्यस क्षेत्रको फुटबल विकासमा आफ्नो भुमिका देखाईन्।
‘दोस्रो संस्करणमा पुरस्कार राशि दोब्बर पारेपछि लागत पनि बढेको थियो,’ सुरेशले भने, ‘पहिलो संस्करणमा झै खल्तीबाट पैसा हाल्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर हामी सहयोगका लागि विभिन्न नेताहरुकोमा पनि धाएका थियौं। कसैले चासो देखाएनन् तर आर्जुले भने हामीलाई ४० लाख बराबरको प्रायोजन खोजिदिएर ठूलो सहयोग गरिन्।’
तेस्रो संस्करणमा पनि आर्जुले पहिले झै प्रायोजन जुटाउँन सहयोग गरिदिएपछि यस संस्करणलाई अझै भव्य बनाउँन आयोजक जोडतोडले लागेको छ।
क्लबका अध्यक्ष सुरेश आफै एक महिना बिरामी भएर दिल्लीमा उपचार गराएका फर्किएका छन्। चिकित्सकले उनलाई कम बोल्न सुझाव दिएका छन् तर गोल्डकपको दिन नजिकिँदै गर्दा उनको व्यस्तता झनै बढेको छ। एन्फाले उपलब्ध गराएको समयमा जसरी पनि गोल्डकप सम्पन्न गर्ने उनको दृढता छ।
खेलाडीलाई तलब दिएर राख्ने योजना
गतवर्ष सुदूरपश्चिम–११ ले १० वटा मोफसलका गोल्डकप खेलेको थियो। जसमा क्लबले दुई फाइनल खेल्दा एकको (राजर्षी जनक कप फुटबल, सर्लाही) उपाधि उचालेको थियो भने नेपालगञ्ज गोल्डकपको फाइनल खेलको थियो।
तेस्रो संस्करणको आयोजनापछि भने क्लबलाई व्यवसायिक हिसाबले अघि बढाउने सुरेशको योजना छ। ‘हिजोसम्म खेलाडीहरुले बिना तलब निश्वार्थ हिसाबले खेलिरहेका थिए,’ सुरेशले भने, ‘तेस्रो संस्करणपछि भने हामी व्यवसायिक हिसाबमै अघि बढ्ने योजनामा छौं। अब आर्थिक रुपमा क्लबलाई सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने योजनामा कार्यसमिति बसेर छलफल गर्नेछौं।’
क्लबले आगामी माघदेखि १५ जना खेलाडीहरुलाई अनुबन्ध गरेर नै राख्ने योजना बनाएको छ। ती खेलाडीलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक दिन सुरु गरिने उनले बताए।
सुरेशले बनाइदिएको प्लेटफर्मबाट अहिले सुदूरपश्चिम एघारका ११ जना खेलाडी ए डिभिजनका विभिन्न क्लबमा आवद्ध भएर सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग समेत खेलिरहेका छन्।
पुरस्कार रकम बढ्दैन्
एन्फाले खप्तड गोल्डकपलाई वर्गीकरण गर्दा ‘क’ श्रेणीमा राखेको छ। ‘क’ श्रेणीको मोफसलको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता विगत तीनवर्षमा लगातार राशि बढाएपनि तेस्रो संस्करणबाट भने नबढाउने सुरेशले बताए।
‘अब हामी पुरस्कारलाई प्राथमिकता दिँदैनौं,’ भविष्यको योजना सुनाउँदै उनले भने, ‘विजेता पुरस्कार भन्दा अन्य भत्ताहरु बढाउँनेछौं। अहिले म्याच मनी २० हजार दिँदैछौं भने अर्कोपटक ४० हजार पुर्याउँने छौं। दोस्रो कुरो अहिलेसम्म नेपालमा महिला गोल्डकप भएको छैन्। गतवर्ष हामी गर्ने सोचमा थियौं तर घोषणा चाहिँ गरेका थिएनौं। सायद यसपटक साफ सकिने बित्तिकै नेपालको गोल्डकप सुदूरपश्चिमबाट गर्ने घोषणा गर्नेछौं। यसपटक फागुनमा गर्ने सोच थियो। त्यही समयमा साग पर्ने भएकाले चैत्रको अन्त्यसम्म आयोजना सम्भव छैन्। समय हेरेर चाडैँ निर्णय गर्छौ। जुन मिति हामीले पाउँछौं। त्यसमा हामी गर्नेछौं।’
यो पनि: खेलप्रेमी नगरप्रमुख
प्रकाशित १६ पुस २०७५, सोमबार | 2018-12-31 15:11:12